Xiisadda Qatar Iyo Eritrea: Doha Oo Jawaab Kulul Ka Bixisay Eedeymihii Asmara – somalilandtoday.com
Xiisadda Qatar Iyo Eritrea: Doha Oo Jawaab Kulul Ka Bixisay Eedeymihii Asmara
(SLT-Doha)-Dowladda Qatar ayaa diiday eedeymo been abuur ah oo uga yimid dowladda Eritrea, oo ay Doha ku eedeysay inay dalkeeda ka waddo arbushaad dhan walba ah.
Qatar ayaa sheegtay in ayna wax shaqo ah ku lahayn koox ama kooxo ku sugan dalka Eritrea, taasina ay dowladda Eritrea “si wanaagsan uga war-hayso.”
Bayaan shalay kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibedda Qatar ayaa lagu sheegay inay aad ula yaabtay bayaanka ay deg degta usoo saartay wasaaradda warfaafinta Eritrea, intii ay mari lahayd hanaanada diblomaasiyadda iyo sharciga ah ee la aqoonsan yahay.
“Tani waxa sare u qaadeysaa shakiga laga qabo ujeedka dhabta ah iyo dhinacyada ka dambeeyey bayaanka aan garowshiiyaha lahayn” ayaa lagu yidhi bayaanka wasaaradda arrimaha dibedda Qatar.
Wasaaradda arrimaha dibedda Qatar ayaa ugu baaqday wasaaradda warfaafinta Eritrea “in ay eegto xaqiiqda iyo xudunta dhibaatada, intii ay sameyn lahayd eedyemo been abuur ah oo ka dhan ah dal saaxiib ah oo dadka Eritrea ay xushmad u hayaan.”